Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Hotmail ngobuqhetseba | | Iindaba zeGajethi
Indlela yokubuyisela isitshixo seHotmail esiye sangena
U-Eder Esteban | | software, Windows
Ngaphandle kweziqinisekiso ezinkulu zokuba uMicrosoft ufike kumthengi we-imeyile, zisekho iimeko ezithile apho Umntu othile unokukhangela isitshixo seHotmail (okanye i-Outlook.com entsha), ngenxa yesi sizathu uzama ukuyifumana kwakhona phantsi kwendlela kuphela enikezelwa ngumsayino.
Imfihlo kunye nemigaqo-nkqubo yezokhuseleko, IMicrosoft ayinikezeli enye indlela eya kwesiqhelo xa kufikwa ekubuyiseni igama eligqithisiweyo le-Hotmail, ke ngoko kuya kufuneka sizame ukuqaphela izinto ezimbalwa ebekufanele ukuba ngaphambili zazimiselwe xa sasinokufikelela kwiakhawunti ye-imeyile. Ngoku siza kuzama ukukhankanya, yintoni ekufuneka yenziwe ukuba ngenxa yesizathu esithile asikwazi ukungena kwinkonzo.
1 Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Hotmail ngoncedo lwayo lobuchwephesha
2 Sebenzisa enye i-imeyile yokubuyisela
3 Umyalezo oya kwiselfowuni
4 Olunye ukhetho
Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Hotmail ngoncedo lwayo lobuchwephesha
Inye kuphela inyathelo ekufuneka ulithathile ngeli xesha ukuba iphasiwedi yakho ye-Hotmail iye yonakaliswa kwaye ke, awungekhe ungene okanye ungene kule nkonzo. Sincoma ukuba uqale uye Kweli khonkco lilandelayo, apho unokufumana kuphela ezinye iindlela ezintathu iMicrosoft ekunika zona xa kuziwa ekubuyiseleni okanye ukuseta kwakhona iphasiwedi yakho ye-Hotmail, ezi:
"Ndilibele inombolo yokuvula"
"Ndiyayazi ukuba yintoni igama lam eliyimfihlo, kodwa andikwazi kungena"
"Ndicinga ukuba omnye umntu usebenzisa iakhawunti yam yeMicrosoft"
Kuya kufuneka ukhethe naziphi na iindlela ezi-3 eziboniswe kwiscreen kwaye besikhe saphakamisa ngaphambili.
Kuxhomekeka kukhetho olwenzileyo, ukuze ufumane kwakhona isitshixo seHotmail esilahlekileyo, esityelweyo okanye esitshiweyo, iMicrosoft inokukubuza:
Inombolo yefowuni oza kuyibhalisa kuseto lweakhawunti.
Ukuba ukwazile ukumisela naluphi na olu lwazi kwiakhawunti yakho yeHotmail, unokukwazi fumana ikhowudi, umyalezo weSMS okanye i-imeyile yokubuyisela Isitshixo seHotmail kwimizuzwana embalwa; Mhlawumbi njengesiqwenga seengcebiso sinokucebisa ukuba ukhethe ukhetho lwesithathu ukuba ucinga ukuba kukho umntu obile iphasiwedi yakho ye-Hotmail; Ngolu khetho kufuneka ukhethe kuphela «Okunye» ukubeka inkcazo encinci yento eyenzekayo; ngaphakathi kwalo myalezo ungalibali ukubeka enye idilesi ye-imeyile ukunxibelelana nawe. Ukuba iMicrosoft ifikelela Qaphela ukuba kukho into engaqhelekanga (ngedilesi ye-IP ngaphakathi kweakhawunti yakho), iya kuqhagamshelana nawe kwangoko kwi-imeyile oyishiye ngaphakathi komyalezo kolu khetho lokugqibela.
Ukuba ulahlekelwe kukufikelela kwiakhawunti yakho yeHotmail, kukho iindlela ezininzi onokuyifumana ngayo. Ngokuqinisekileyo kukho indlela ehambelana noko ukufunayo ngelo xesha, ukuze ube nokufikelela kwi-akhawunti ngalo lonke ixesha. Izinketho esinazo ezikhoyo zilandelayo:
Sebenzisa enye i-imeyile yokubuyisela
Into eqhelekileyo xa usenza iakhawunti ye-imeyile kukuba kufuneka sinike iakhawunti eyongezelelweyo ye-imeyile. Ngale ndlela, xa kunokwenzeka into ethile, siya kuba nenye indlela yokufikelela kuyo. Kwimeko ye-Hotmail / i-Outlook, bahlala befuna i-imeyile yokufumana kwakhona, enokuba yiakhawunti kwiGmail okanye nakweliphi elinye iqonga leimeyile. Ukuba siyilibele iphasiwedi, kuya kufuneka ucofe olu khetho kwiscreen ukufaka ipassword.
Ngokwenza oku, siya kuboniswa isikrini apho sinokukhetha indlela esifuna ukuyisebenzisa ukubuyisela ukufikelela. Ngokwesiqhelo kuhlala kusetyenziswa le imeyile yokufumana kwakhona. Yintoni abaza kuyenza emva koko kwi-Hotmail / Outlook, yiyo thumela ikhowudi kwiakhawunti ye-imeyile. Xa uyifumene, kuya kufuneka ufake le khowudi kuphela kwaye uya kuba nakho ukufikelela kwiakhawunti. Uya kucelwa ukuba uyenzele iphasiwedi entsha. Kwimizuzu embalwa siya kuba nakho ukufikelela kuyo kwakhona.
Umyalezo oya kwiselfowuni
Kwimeko apho ungenayo enye iakhawunti ye-imeyile, eyinto enokwenzeka kwiimeko ezininzi, sinenye indlela ekhoyo kwiHotmail. Singasebenzisa iSMS. Oku kuyafana nakwimeko yangaphambili, ngeli xesha kuphela ikhowudi yokhuseleko abaza kusithumela yona ithunyelwa kwifowuni yethu ephathekayo ngeSMS. Akukho mahluko omnye kulo mbandela.
Ke ngoko, xa siza kungena ngaphakathi, kuya kufuneka sicofe ukhetho endilulibeleyo ngegama eligqithisiweyo. Sithunyelwa kwiscreen esilandelayo, apho kuhlala kucetyiswa ukuba kusetyenziswe i-imeyile yokufumana kwakhona. Ukuba awunayo, okanye ukhetha ukusebenzisa i-SMS, kuya kufuneka ucofe ukhetho lwe-SMS, ukuba nje udibanise inombolo yefowuni kunye neakhawunti ngaphambili. Iyavunyelwa ke ukuba ithumele iSMS kwifowuni yakho, oya kuthi ungene.
Emva koko kuya kufuneka ufake le khowudi kwi-Hotmail, ukuqala inkqubo yokubuyisela iakhawunti. Xa unokufikelela kuyo, Into yokuqala edla ngokubuzwa kukutshintsha iphasiwedi. Ukuze singaphulukani nofikelelo kuyo kwakhona.
Kungenzeka ukuba ezi zinto zimbini azikulungelanga ityala lakho. Ke ngoko, unokukhetha ukhetho lwesithathu. Kwiskrini apho siphawule khona ukuba siyilibele iphasiwedi, sinokukhetha okubizwa ngokuba "Andinalo olu vavanyo." Ngokucofa kuyo, iya kusisa kwiscreen apho iakhawunti iqala khona kwakhona. Kuya kufuneka sigcwalise idatha ethile, ukuze ekugqibeleni sifumane ukufikelela kuyo.
Yinkqubo ende edinisayo, kodwa isebenza kakuhle kwaye into ebalulekileyo yile siya kuba nokufikelela kwiHotmai kwakhonaNdiyathanda oku. Ke kuya kufuneka ugcwalise amasimi abawacelayo.
Njengokhetho lokugqibela esinokuhlala sihlala ngalo yenza i-imeyile ye-Hotmail.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Indlela yokubuyisela isitshixo seHotmail esiye sangena
Izimvo ezi-26, shiya ezakho
Ndifuna ukufumana i-hotmail yam kunye negama lokugqitha
Phendula u sonia
URodrigo Ivan Pacheco sitsho
Sonia othandekayo, uphawule kumyalezo wakho ovela kwelinye inqaku, ukuba oku kungabonisa umonde. Ngelishwa u-Microsoft uthatha ixesha ukuqinisekisa ulwazi oluthunyelwe kuwe ngendlela ecetyisiweyo. Ingumbono olungileyo ukunyanzelisa imfuno enjalo amaxesha ngamaxesha ukuze isicelo sithathelwe ingqalelo. Enkosi ngotyelelo lwakho kwaye sinqwenela isisombululo esisebenzayo kwingxaki yakho.
Phendula uRodrigo Iván Pacheco
Molo ndifuna ukuseta kwakhona iakhawunti yam !!! Ndinayo yonke imisebenzi yam kuxhomekeke kuye. Iphepha leMicrosoft alindiniki mpendulo. Iposi yeyam !!! Ndinamawaka ovavanyo. Nxibelelana nam ku igqwethachilotegui@gmail.com okanye kwifowuni yaseArgentina 011-57447038 (iselfowuni) nceda !!!!!!!
Molo, umhlobo unenkampani kwaye ophethe iakhawunti wayiba, nayo yonke ingcaciso yabathengi, kungenziwa ntoni?
Andikhumbuli iphasiwedi. Ndingenza ntoni?
Ndicebisa ukusebenzisa ikuki. Kuxhomekeka kwisikhangeli osisebenzisayo ukufaka i-imeyile yakho eshushu, yindawo ekuyo ezi cookies. Enkosi ngotyelelo lwakho.
Eyona Nkonzo yeHacker
UKUBA UNQWENELA UKUSEBENZA NENKONZO ENKULU NEYIMFIHLO, QHAGAMSHELANA NATHI.
-Igama eligqithisiweyo leeNethiwekhi zeNtlalo
Iphepha leWebhu Iphasiwedi
-Siguqula amanqanaba eyunivesithi
-Siphanda iimeko zobuqhetseba
-Sicima imbali yebhanki
NAKUPHI IMIBUZO OKANYE IMIBUZO SIZA KUKUYA KUWE
APHA . OLUNYE OLUQHELEKILEYO KWI-TROJANS: I-FrogRAT YAKULE YENZIWE NGENYE YEENKQUBO EZIPHAKAMILEYO EMALWARE (Margera)
UNOKUZIJONGA IINKCUKACHA ZALE TRAYAN YOKWENZA KWI-
Yiyo kuphela iwebhsayithi onokuthi uthenge kuyo. EMPUMA TROYAN.
thumela ulwazi ukunxibelelana nawe
UJulian Medina sitsho
Ndifuna ukufumana iphasiwedi yeakhawunti ye-facebook, ungandinceda? ndenze ntoni, kungxamisekile, enkosi
Phendula uJulián Medina
Igama loqhagamshelwano Pavlov sitsho
Z3U5. Thumela ulwazi ukunxibelelana nawe. Ndidinga ukuqesha inkonzo.
heinnert de diaz sitsho
Kulungile ndifuna ukubuyisa iphasiwedi yam, ungandinceda?
Phendula u-heinnert de diaz
Ndiyifumene iTejada Rodriguez sitsho
Ndiphulukene negama lokugqitha andinakukwazi ukufaka iakhawunti yam imeyile yam missybeli @ hotmail. Com
Phendula ivelisse Tejada Rodríguez
Ndikhawuleze ndangena kwiakhawunti yam ye-hotmail, bayitshintshile yonke ingcaciso, ngoku njengoko kungenakwenzeka ukuba ndiyifumane kwakhona ngokwam, sele ndizamile kwaye akukho nto inokundinceda
Phendula kwi karin
Ndiyifumana njani kwakhona iphasiwedi yam ye-hotmail?
Iziqhamo zeMiva sitsho
Ndiphulukene negama lokugqitha le-hotmail kwaye ndifuna ukubuyisa kuba ngumsebenzi wam
Phendula kwiziqhamo zeMiva
Ngexesha elidlulileyo umtshana wam khange ayisebenzise le dilesi ye-hotmail (junior0613@hotmail.com). Awusayazi iphasiwedi okanye enye into. Ingxaki kukuba i-iPhone esiyithumela ukulungisa yi-iCloud eqhagamshelwe kule dilesi. Ngubani onokundinceda ndibuyise iphasiwedi ... enkosi kakhulu kwangaphambili.
anna umgxobhozo sitsho
Andikhumbuli iphasiwedi yam ye-Hotmail, ungandinceda ndiyifumane kwakhona?
Phendula kwi-anna pantano
Ewe, bandigqogqa kwaye batshintsha lonke ulwazi (enye i-imeyile kunye nenombolo yomnxeba), basebenzise amanyathelo amabini okuqinisekisa ...
Ukukhanya koLwandle sitsho
Molo, andilikhumbuli iphasiwedi yam ka-Facebook, ndiyivule ngekhowudi, kodwa ukwenza inyathelo bandibuza iphasiwedi, andikhumbuli enye ye-imeyile ye-Hotmail ekucingelwa ukuba iyafana, kwaye inombolo yefowuni endiyibekileyo andisenayo, ndifuna ukwazi ukuba ndenzeni, enkosi !!
Phendula uLuz Marina
UDaniela ogaz sitsho
Mva kwemini yam ndizama ukubuyisa iakhawunti yam ebendiyivulile kwiLaptop kwaye ndavula iselfowuni kwaye ngoku andiyazi iphasiwedi. Ndinike umnxeba nge-imeyile kodwa andikwazi ukuvula i-imeyile yam. Ndinike ne-imeyile ye-gmail. com kwaye bathi bathumela ikhowudi kodwa ayifiki. ndicela ukuba umntu angandinceda enkosi kakhulu
Phendula kuDaniela Ogaz
Molo, andilikhumbuli igama lam eliyimfihlo kunye nenombolo endiyifakileyo, andisenayo, umntu uyazi indlela yokwenza i-xq ngekhowudi oya kuyo kwenye i-imeyile ayincedi
Ngena kudala kwaye ungaze usebenzise iHotmail. Isibini esingatshatanga. Ndenzele u-facebook andiyikhumbuli inombolo yefowuni okanye enye i-imeyile umntu andincede nceda
Ndingu-sonia ramirez kwaye andilikhumbuli iphasiwedi yam ye-Hotmail kwaye ndifuna ukuyifumana kwakhona ndinazo ezine esazitshoyo kwifowuni yangaphambili, ngoku ndinenombolo entsha ndicela undincede
IMarcela mezzina sitsho
yenzayo 3 iminyaka
molo ndinxunguphele kuba bayivimbile iakhawunti yam yeHOTMAIL endinayo iminyaka. Bandibuza idatha endingayikhumbuliyo kwaye ndibeka le nto bendicinga ukuba ndiyibekile ngelo xesha. Kodwa akukho nanye kwezi nzame ebanelisayo kwaye bayivala iakhawunti yam. Andazi ukuba ndenzeni, ndinqwenela ukuba ndisebenzise loo akhawunti ngezizathu zobungcali nezobuqu kwaye wonke umntu unayo loo imeyile. Andazi ukuba ndenzeni, bendijonge i-intanethi kangangeentsuku, ndizama ukuthumela imiyalezo kwiMicrosolft kodwa olu khetho alibi kuba besithi iphepha liphelelwe lixeshana. Bayivalile ngokungenasizathu ngaphandle kokubonisana, kwaye ngoku bayirhoxisile kwaye andazi ukuba ndenzeni. Nceda undincede? Enkosi!!!
Phendula uMarcela Mezzina
UCarlos Salazar sitsho
Molo ngokuhlwa, ndilapha ukuzokucela uncedo lwakho, andinakho ukufaka i-imeyile yam ye-hotmail, inombolo yeselfowuni endiyifakileyo andisenayo kwaye andikhumbuli nto malunga nemibuzo abandibuza ukuba ndibuyise iakhawunti, njengamaphasiwedi amabini okugqibela endiwasebenzisileyo, kule meko ndikhumbula elinye kuphela, andiwukhumbuli umbuzo wokhuseleko, imiyalezo yokugqibela ethunyelwe. Nceda ndiluxabise uncedo lwakho njengoko ndifuna ngokungxamisekileyo ukufaka imeyile yam.
Phendula uCarlos Salazar
Molo ngokuhlwa, bendizama ukufikelela kwiakhawunti entsha ye-hotmail malunga nenyanga kwaye indixelela ukuba igama eligqithisiweyo alichanekanga kuba ndiphendula imibuzo eza kum kwaye iyaqhubeka ngaphandle kokundishiya, andiqondi ukuba kwenzeke kum kwaye ndikhawuleze kakhulu ukuba ingavulwa kuba iyi-imeyile yam yomsebenzi, ungandinceda ???
I-Scuf Impact, umlawuli wepro ofunwa ngabo bonke abadlali
Uyazi njani ukuba ngubani onditsalela umnxeba ngenamba engaziwayo